🥇 ▷ Sida loo hagaajiyo xiritaanka Google Chrome ee aaladaha wata Jailbreak ✅
Sida loo hagaajiyo xiritaanka Google Chrome ee aaladaha wata Jailbreak
Kadib markii la siidaayay casriyeynta ugu dambeysay ee Chrome-ka ee macruufka isticmaaleyaasha badankood waxay ka cabanayeen cillad la’aanta barnaamijka, kuwa saameynta ku yeeshay waxay ahaayeen aalado ay Jailbreak sameeyeen.
Isticmaalayaashani waxay bilaabeen inay ogaadaan in kadib markay fureen arjiga, ay si lama filaan ah u xirmeen iyaga oo aan si ficil ah ugu oggolaan inay bilaabaan adeegsiga. Tan waxaan u qaadan karnaa in Google uu soo saaray khadad koodh ah oo saameyn ku leh hawlgalka barnaamijka ee aaladaha Jailbreak.
Marka loo eego waxa Google ay xaqiijisay, waxaan dhowaan arki doonnaa cusboonaysiin tilmaamaysa dhibaatadan in kasta oo hadda aan u adeegsan karno shaxda soo socota ee noo oggolaan doonta inaan sii wadno baarista Chrome-ka iyada oo aan loo xirin qaab aan loo baahnayn:
Fur barnaamijka Google Chrome ee macruufka
Ka dib guji halka ku taal menu dhinaca midig ee sanduuqa raadinta.
Xullo dooro Dejinta.
Markii aan gudaha ku jirno ayaan u dhaqaaqnaa ikhtiyaarka Asturnaanta.
Markaa ayaan dooran doonnaa U dir xogta isticmaalka.
Halkaa marka la joogo waa inaan hubinaa in ikhtiyaarka «shaqeynayoHad iyo jeer»Ama«Wi-Fi kaliya«
Talaabooyinkan, dabcan, waa in si dhakhso leh loo raacaa kahor intaanu dalabka dhicin oo uu mar kale si lama filaan ah u xirmayo.
Sidoo kale, waxaa jira tweak ku jira bakhaarada HASHBANG (http://hbang.ws) oo loo yaqaan Qalabka burburka ‘Chrome Crash Fix’ kaas oo xallinaya dhibaatada adigoon oggolaanin inuu u soo diro Chrome adeegsiga Google adeegsiga. Tilifoonkan waxaa bilaash looga heli karaa Cydia.